ISOFTWARE EGQWESILEYO YOKUBALA EYI-3D (YASIMAHLA KUNYE NENTLAWULO) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Isoftware eGqwesileyo yokuBala eyi-3D (yasimahla kunye neNtlawulo)
Isoftware eGqwesileyo yokuBala eyi-3D (yasimahla kunye neNtlawulo)
Wamkelekile kuphononongo lwethu lwesoftware ebalaseleyo yoyilo lwe-3D kubandakanya iinkqubo zasimahla nezihlawulelwayo.
Ukuma komhlaba yindlela entle yokuguqula umphandle wekhaya lakho. Iyadi eyenziwe kakuhle inokuyinika isibheno esongeziweyo kunye nokubonelela ngendawo entle yokonwabisa iindwendwe. Nangona kunjalo, xa uzama ukuza noyilo lwephupha lakho, kunokuba nzima ukuba nomfanekiso wento ozama ukuyakha. Ngethamsanqa, kukho iinkqubo ezithile eziluncedo zokwakha isoftware ezinokukunceda ucwangcise iyadi yakho yokuphupha.
1. SketchUp Simahla
2. IsiCwangciso seKhaya-seGadi esingcono samaKhaya kunye neeGadi
3. Ukudibanisa indawo yokwenyani
4. Uyilo lweKhaya le-DreamPlan
5. Iyonke i-3D Landscape kunye neDisk Deluxe
6. Ikhaya loYilo lweNdalo kunye noMhlaba
7. Ekhaya LOKUJONGWA KWEPRO
ISketchUp ineefom ezimbini. Kukho ingxelo ehlawulelweyo, iSketchUp Pro, kunye nenketho ekwi-Intanethi, iSketchUp yasimahla. Ezi zixhobo zenzelwe abaqulunqi abaziingcali kunye nabakhi ukuba bazisebenzise, ​​ke nenketho yasimahla ikunika okuninzi ekusebenzeni ngaphandle kokulahla ideni. Le nguqulo yeSketchUp iyaphoswa ziimpawu eziphambili kodwa ngeSketchUp Pro ibiza umrhumo wexesha elinye le- $ 695, uhlobo lwasimahla lukhetho olungcono kubasebenzisi abaqhelekileyo. Ukuba ufuna ukuzama isandla sakho kwiSketchUp Pro, banikezela ngesilingo sasimahla.
Njengoko sele kukhankanyiwe, esi sisixhobo sesikhangeli endaweni yeapp. Iindaba ezimnandi zezokuba oku kuyenza ifikeleleke kwindalo iphela. Nokuba usebenzisa iChannel, iSafari, okanye iFirefox, uya kuba nakho ukuyila imeko-bume yakho ngale nkqubo.
Inkqubo ikuvumela ukuba unikezele kwaye uhlele iimodeli ze3D zoyilo lwakho lomhlaba. Inesidingo esikwinqanaba elisezantsi lesakhono sobuchwephesha, ke unokuza kunye nokwenza izimvo ngaphandle kokonganyelwa yindlela yokusebenzisa isixhobo. Nangona kunjalo, ayikhuphi kwiimpawu zokwenza ubume bendawo yakho bujongwe kanye ngendlela ofuna ngayo.
Ngokunokwenzeka, eyona nto iluncedo kakhulu kule nkqubo sisixhobo solawulo lweprojekthi yeCAD ebizwa ngokuba yiTrimble Connect. Oku kukuvumela ukuba wabelane ngeyilo lakho kunye nekontraka osebenza naye kwaye nisebenzisane noyilo.
Eyona nto iphambili kule app kukuba ngamanye amaxesha ishiyeka. Oku kuxhomekeke kwizinto ezimbalwa. Inye, ukuba kukho naziphi na iingxaki kwisikhangeli sakho esele sizenze ukuba zihambe kancinci, kuya kuba nzima ukusebenza nale software. Okwesibini, ukuba uyilo oluntsonkothileyo kunye nesixhobo esitshintsha isithunzi esisebenze kuso, ngamanye amaxesha kungathatha ixesha lesikhangeli sakho ukubamba.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free
Amakhaya kunye neeGadi ezingcono ligama lekhaya xa kufikwa kuyilo lwasekhaya. Ngelixa kwakudala kwakuthandwa ukucofa uyilo oluthandayo kwiikhathalogu, ngoku unokwenza uyilo lwakho. Banezixhobo ezimbalwa onazo kodwa kolu luhlu, isicelo sabo sePlani-yeGadi lolona khetho lubalaseleyo kule njongo.
Isixhobo se-Plan-a-Garden sikhululekile ukusebenzisa, ukuze nabani na akwazi ukufikelela kuso. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile ukuyisebenzisa kukwenza iakhawunti yasimahla yeeKhaya kunye neeGadi. Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi yabo, unokufikelela kwisixhobo.
Sebenzisa isixhobo sePlani-ye-Gadi kulula kodwa kuyasebenza. Okokuqala, unokukhetha ekusebenzeni kwindlela yokungena, ngaphambili okanye ngasemva kweepheranda, okanye kumadama angasemva. Iindidi ezahlukeneyo zendlu ziyafumaneka kwi-app ezifana neemeko zasedolophini nasemaphandleni. Uyilo oluchanekileyo ngakumbi, ungalayisha iifoto zendlu yakho kunye neyadi uyilo.
Zininzi izinto onokukhetha kuzo xa uyila iyadi yakho. Unokongeza izityalo, izakhiwo, kunye nezinto ezenziwayo ukuze uzenzele inkangeleko oyifunayo. Ezi azizizo izityalo ezilula ezikhutshelwa ngaphezulu nangaphezulu. Zingaphezulu kwe-1 000 iintlobo zezityalo onokukhetha kuzo. Xa kuziwa kwizakhiwo kukho iindlela ezininzi ezinje ngeebhentshi, izikhongozeli, i-gazebos kunye ishedi yoyilo . Udlala ngokukhanyisa kunye nezinye izixhobo.
Isangqa sokubandakanya idayimane kunye nesafire
Indlela yokusebenzisa oku ilula. Konke okudingayo kukutsala kwaye ulahle amanqaku owafunayo kwifoto yakho. Yenzelwe abaninimzi ukuba bayisebenzise, ​​ke abayenzanga yanzima njengesoftware yoyilo lobungcali ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.bhg.com/gardening/design/nature-lovers/welcome-to-plan-a-garden/
I-Landscaping Plus yokwenyani kukungena kwethu kokuqala okuya kukuxabisa ngemali ngexesha elinye elimalunga ne- $ 79. Eli linyathelo elivela kwisoftware yoyilo lokwenyani yokwenyani kuba le nguqulo yongeza izixhobo ezingama-280 ezintsha onokuzisebenzisa. Ngoku, unokongeza amanqaku anje nge imingxuma yomlilo , ifanitshala yangaphandle, izixhobo zokutyala, iiTV, imidlalo yeetafile, imihombiso eludongeni yomgangatho wakho okanye iveranda nokunye.
Ngokupheleleyo, unokulindela ukufikelela kwizinto ezingaphezu kwama-5,300 ezinokwenene ezinjengezo sithethe ngazo. Unokukhetha izinto ezingama-5,100 zokuhombisa eziphilayo ezifana nemithi, izihlahla, amahlahla kunye neentyatyambo. Ukukunceda ukuba uze nesicwangciso esineenkcukacha nesinokwenzeka, le nkqubo ikwanayo neencylopedia yezityalo. Oku kuya kukunceda ukhethe izityalo ezinenqanaba lokugcina elisebenzelayo. Iya kukwazisa ukuba zeziphi izityalo ezinokukhula kwimozulu yakho.
Into eluncedo nangakumbi sisixhobo sokuqikelela iindleko esi sinaso esi software. Ikuvumela ukuba wazi uhlahlo-lwabiwo mali lwakho njengoko uhamba, ukuze ungezi nesicwangciso esityebileyo kuphela ukubonisa ikontraka ekunika uqikelelo ongenakukufikelela.
Ngokujonga isicwangciso sakho, unokukhetha okuninzi ngale software. Ngokuhambelana nomxholo wolu luhlu, unokukhetha i-3D kunye nenketho ye-2D. Ukongeza, ungathatha inyani ebonakalayo ngegadi yakho entsha kunye neyadi. Oku kukuvumela ukuba uyile isikhonkwane kwaye uzive ngathi ulapho ukuyivavanya ngaphambi kokuba uyiqalise ngokwasemzimbeni.
Le yenye yesoftware eyenzelwe ukuba isetyenziswe ngabaqalayo. Kananjalo, ayinayo nayiphi na isoftware enzima kakhulu ekufuneka uyiqonde. Kulula ukuqalisa kwaye uqalise ukwenza ngokwezifiso isicwangciso sakho.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.ideaspectrum.com/new-home-landscaping-software/?a_aid=af3spec46
Isoftware ye-NCH yinkampani onokuthi uyiqaphele kuluhlu olubanzi lwesoftware abayithengisayo. Ngeli xesha, bakuzisela ithuba lokuyila ikhaya lakho, ingaphakathi lalo, kunye nembonakalo yelizwe kunye nesoftware yabo ye-DreamPlan Home Design.
Oku kungaphezulu kokubanjwa kwayo yonke isoftware kunokuba ikhetheke ngokukodwa. Ungayisebenzisa ukwakha ikhaya lakho ukusuka emhlabeni. Ikuvumela ukuba uyile isicwangciso somgangatho, uyilo lwangaphakathi, kunye nokuma komhlaba kunye noyilo lwegadi. Ungayisebenzisa ukuyilungisa kwakhona, ukuyila kwakhona, kunye nokongeza ukongezwa kwikhaya lakho esele likho.
Ngokumalunga nokubekwa komhlaba, ungongeza izityalo, imithi, kunye neziphumo zemo yomhlaba ukutshintsha iziphumo zendalo eyadini yakho. Unokongeza ngakumbi ngokucacileyo izinto ezenziwe ngabantu ezinje ngamachibi kunye neemodeli zokuchukumisa ezincinci ezinje izitulo okanye iindlela ze-mosaic. Ikwavumela ukuba ulayishe imifanekiso yakho, ke awunakukhathazeka ngokwenza into engazukusebenzela ikhaya lakho okanye ngezinto osele uzicwangcisile ngasemva kwendlu yakho.
Esi sixhobo senzelwe ukuba sisetyenziswe ngabanini bamakhaya endaweni yeekhontrakthi zobungcali. Oku kuthetha ukuba ayinalo ujongano oluntsonkothileyo oluthatha ixesha elininzi lokuqonda indlela yokusebenzisa. Okwangoku, abadluli kwizinto ezininzi ezinokwenziwa ngokwezifiso zokwenza ngokobuqu eyadini lakho okanye ingca engaphambili.
Uyilo lweKhaya le-DreamPlan lubonelela ngeeplani ze-2D kunye neemodeli ze-3D zezicwangciso zomgangatho kunye nokulungiswa. Uyilo lwe-2D lungcono kuyilo lwangaphakathi kuba inokuthi ichaze nje ukuba zeziphi iziqwenga ezinjengeengcango kunye neefestile. Indawo yokubonisa umhlaba isebenzisa ukuguqulelwa kwe-3D ukuze ufumane umbono ochanekileyo wokuba iyadi yakho iyakubonakala njani.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.nchsoftware.com/design/index.html
Ukuba ufuna into eyenziwe ngokwenene ngabaqalayo engqondweni, uya kufuna ukuqaphela i-Total 3D Landscape & Deck Deluxe. Le ayisosoftware eyenzelwe ukuba isetyenziswe ngoochwephesha kunye novice kodwa ngakumbi kwabo bangenamava oyilo. Inkqubo igcwele ukufundisa ukukunceda ufunde ukuyisebenzisa. Ngelixa isimahla, inexabiso eliphantsi ngexesha elinye kuphela leedola ezingama-20 zenkqubo epheleleyo.
Ngelishwa, le nkqubo ayihambelani neMac. Nangona kunjalo, ukuba unayo iMicrosoft Window 7, 8, 10, okanye XP, ukhuphelo luyakhawuleza kwaye lulula.
Ungaqala ngokusebenzisa iYardBlock yabo yokuQala ekuvumela ukuba urhuqe kwaye ulahle izinto ezinje ngengca, iidesika, kunye namachibi. Ngenye indlela, ungaqala ngokungenisa iifoto zakho. Oku kunokukunceda ukuba wenze ngokwezifiso i-yard yakho esele ikhona okanye umthwalo kwimimandla kuyilo olufana nefenitshala yefenitshala ongafuni ukuyiyeka.
Le yenye inkqubo ene-encyclopedia yesityalo ebanzi engama-4,600. Ngale ndlela, ukhetha izityalo ezifanelekileyo eyadini yakho endaweni yoko kubonakala kukuhle. Ngaphandle kweemodeli ze-3D, unokubona uyilo lwakho lwegadi kwiplani enekhowudi.
Olona tshaba lokwenyani ngaphakathi lwenkqubo yoyilo ngokwayo kukuba ukwenza oku kube lula ukuyisebenzisa, bathathe izinto ezinzima. Oku kuthetha ukuba uyilo oluza nalo aluyi kuba yinyani.
Iyonke i-3D Indawo yewebhu
Isoftware yokwakha yaseKhaya kunye nesoftware yokuma komhlaba yenye isoftware eza ngendleko ezifanelekileyo kwizinto ezininzi. Inkqubo ye- $ 50 igcwele izixhobo eziza kukunceda wakhe indawo ekuma kuyo amaphupha akho kwaye kulula ukusebenza.
Inkqubo iqala ngokwakha iwizard. Iqala ngesikhokelo samanyathelo ngamanyathelo sendlela yokuseta ubume bendawo kunye nendlela yokuyila. Eli nqaku liluncedo ngakumbi kubantu abafikayo kwiinkqubo ezinje ngezi kuba ayikukuniki iingcebiso kuphela kodwa ikwenza uhambe ngesixhobo ngasinye esenzayo kunye nendlela yaso. Yenza ukuba lonke ushicilelo lube nzima kakhulu xa kuthelekiswa nokuphosa umsebenzisi kwisiphelo esinzulu.
Olu khetho lunelayibrari enkulu kubandakanya izinto ezingaphezulu kwama-7 500 onokuzibeka emva kwendlu yakho. Abanye bakhalaza ngelithi ayinayo into ekuvumela ukuba ubeke abantu kuyilo loyilo lwembonakalo yakho kodwa oku akuthathi kude nokwazi isikali kunye nokusebenza kweyadi yakho.
Into eyahlukileyo enayo le software kukuba iya kukubonisa indlela eziza kukhula ngayo izityalo ekuhambeni kwexesha. Oku kukuvumela ukuba ubone ulwazi olubalulekileyo olufana nokugcinwa kwezityalo kuya kufuna kunye nendlela eziya kubonakala ngayo kumaxesha ahlukeneyo.
Umyili wePlatinam eyiyo Indawo yewebhu
Indawo ye-PRO sisixhobo sokurhweba ukuba uninzi lweekhontrakthi zibhenele kuyilo lwe-3D, i-CAD, umfanekiso wefoto, kunye nokwenza izindululo zabathengi. Oku kunzima kancinci kwinto efunwa ngumninikhaya osemgangathweni. Kungenxa yoko le nto inkampani ize nohlobo olulula, olusebenziseka lula kunye nePro Landscape Home yayo. Inezinto ezimbalwa kunye nezixhobo, kodwa isagcina amanqaku anokufunwa ngumninikhaya kuyilo oluneenkcukacha.
Kulungile, i-Pro Landscape Home yinguqulelo yasimahla yesoftware kwaye usetyenziso luyafumaneka kwizixhobo zikaGoogle, kwizixhobo zeApple, nakwiFire Kindle.
Uqala ngokufaka ifoto yeyadi yakho. Emva koko, unokongeza izinto ezinje ngezityalo, ingca, mulch, kunye nezinye izinto. Nje ukuba wenze uyilo lwakho, ungabelana ngalo nekhontraktha osebenza naye okanye kwimidiya yoluntu enje nge-Facebook kunye ne-Twitter.
Ekuphela kwento inguqulelo yasekhaya yale software ayinakuyenza kukuhlela ii-hardscapes kunye nokwenza izindululo zabathengi. Ikwanazo neempawu ezithile ze-3D kodwa hayi ukuya kuthi ga kubaninikhaya abaya kuphoswa kukuyila uyilo olugqibeleleyo.
Indawo yeWebhusayithi: https://prolandscape.com/en/home-app/
Ukwenza ikhaya olithandayo kuthetha ukugxila kuyo nantoni na ofuna ukuyitshintsha ngaphakathi nangaphandle. Ngezixhobo zesoftware yoyilo lweepropathi ezinje ngezi sabelane ngazo apha, uya kuba nakho ukucwangcisa iyadi yamaphupha akho. Ukuba ufuna ukucwangcisa nokubona ngamehlo ubume bendlu yangasemva, jonga uphononongo lwethu oluphezulu isoftware yoyilo ukufumana ezinye izimvo.
umtshato ulungelwa ngaphantsi kweesenti ezingama-50
iingoma zonyana ezivela kumama
Esona sicatshulwa sothando kuye